चार वर्षपछि कतारमा भेट्ने बाचासहित सकियो रसिया विश्वकप, के-के भए २१औँ विश्वकपमा?
16th July 2018, 10:24 am | ३२ असार २०७५
चार वर्षपछि २०२२ मा कतारमा भेट्ने बाचासहित रसियामा भएको २१औँ संस्करणको फिफा विश्वकप सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। आइतबार रसियाको राजधानी मस्कोस्थित लुजनिकी स्टेडियममा भएको फाइनल खेलमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई हराउँदै दोस्रो पटक उपाधि जितेपछि विश्वकप २०१८ को औपचारिक रुपमा समापन भयो।
सरप्राइजले भरिएको प्रतियोगिता, केही अप्रत्यासित नतिजा, भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भिएआर) को आगमन र आलोचन, पेनाल्टी र आत्मघाती गोल धेरै भएको प्रतियोगिता यस विश्वकपको केही विशेषता हुन्।
क्रोएसियाले अर्जेन्टिनालाई ३-० ले पराजित गर्नु, बेल्जियमले जापानविरुद्ध २ गोलले पछि परेर पनि ३-२ ले जित्नु, दक्षिण कोरियाले जर्मनीलाई २-० ले हराउनु केही अप्रत्यासित नतिजा रहे। यसैगरी पोर्चुगल र स्पेन (३-३ को बराबरी), बेल्जियम र जापान (३-२), फ्रान्स र अर्जेन्टिना (४-३) यी खेलहरु उत्कृष्ट रहे।
के-के भए रसिया विश्वकपमा?
एमबाप्पे विश्वकपको फाइनलमा गोल गर्ने पेले (१९५८) पछि पहिलो टिएनजर बने। उनी विश्वकप फाइनल खेल्ने पनि तेस्रो टिनएजर बने।
उरुग्वेका ओस्कार तावारेज (७१ वर्ष) यस विश्कवकपो सबैभन्दा बुढा प्रशिक्षक बन्दा सनेगलका अलिओउ सिसे (४२ वर्ष) कान्छा प्रशिक्षक बने।
पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार ४ विश्वकपमा गोल गर्ने खेलाडी बने। यस्तै मेक्सिकोका राफेल मार्क्वेजले लगातार पाँच विश्वकप खेल्ने मेक्सिकोकै एन्टोनी कार्भाजल र जर्मनीका लोथर म्याथ्युजको कीर्तिमानी बराबरी गरे भने लगातार पाँच विश्वकपमा कप्तानी गर्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान बनाए।